Sat, Dec 7, 2019 at 8:44am
सोमबार, १३ श्रावन २०७६,	आहाखबर
काठमाडौँ, १३ साउन ।
मुलुकको सबैभन्दा जेठो अस्पतालका रूपमा रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल आफैं बिरामीजस्तो बन्न पुगेको छ । आइतबारबाट १३०औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा अस्पताल विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य देखिएको छ ।
अस्पतालमा अत्याधुनिक उपचार प्रविधिसँगै रक्त क्यान्सर, क्यान्सर स्क्यानिङ, हेमोडाइलाइसिस, एचआईभी तथा हेपाटाइटिस पोजेटिभजस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार सेवासमेत उपलब्ध छ । तर, आवश्यक जनशक्ति र पर्याप्त बजेट अभावका कारण बिरामीले सहज र सरल तरिकाले सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, समयमा पालो नआउने, अस्पतालमा आईसीयू बेड नपाइने, अस्पतालभित्रैको फार्मेसीमा औषधि अभाव हुने र राति फार्मेसी बन्द हुँदा बिरामी भौंतारिनुपर्ने बाध्यता छ । बिरामीको एउटै गुनासो छ, ‘हामीलाई त कसैले पनि मतलव गर्दैैनन् ।’
विगत एक वर्षको अवधिमा अस्पतालको इमर्जेन्सीसहित ओपीडीबाट ४ लाख २२ हजार ८ सय १ जनाले सेवा लिएका छन् । दैनिक १ हजार १ सय ५८ जना बिरामी वीर अस्पतालमा पुग्ने गरेको देखिन्छ । यस्तै, ६ हजार ८ सय ७७ जनाले इमर्जेन्सीसहितको सेवा लिएको अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारले वीर अस्पताललाई २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको देखिन्छ भने सो अवधिमा अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी ३३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भएको तथ्यांक अस्पतालसँग छ । तर, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीको सेवा र सुविधाका लागि सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपरेको देखिन्छ । खर्चको तुलनामा अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी कम भएपछि वीर अस्पताल सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपरेको हो । २ सय ५० चिकित्सकसहित १ हजार ५ सय कर्मचारी रहेको अस्पतालमा ४ सय ६० शøया मात्रै छन् । जाइकाको सहयोगमा सय शøयाको भवन बने पनि सरकारले बजेट निकासा नगर्दा स्वास्थ्य सेवा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारले समेत वीर अस्पताललाई पर्याप्त मात्रामा बजेट नदिएको वीर अस्पतालका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आईसीयूमा २३ बेड मात्रै
वीरको आईसीयू कक्षमा २३ वटा मात्रै शøया छन् । आईएसीयूमा बेड अभाव भएपछि बिरामी निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् । तर, वीर अस्पतालले यसै वर्षभित्र थप २० शøया थप्ने लक्ष्य राखेको समाचार राजधानीमा छ ।
२४सै घण्टा चलेन फार्मेसी सेवा
कर्मचारी अभाव देखाउँदै अस्पतालले २४सै घण्टा फार्मेसी सेवा चलाउन सकेको छैन । वीरले रात्रि सेवातर्फ फार्मेसी चलाएको छैन ।
५५ जनाले लिए स्वास्थ्य बिमा सेवा
मुलुकभर स्वास्थ्य बिमा लागू भएसँगै वीर अस्पतालले पनि स्वास्थय बिमा लागू गरेको छ । विगत एक वर्षमा अस्पतालबाट ५५ जनाले स्वास्थ्य बिमा सेवा लिएका छन् । कुल बिरामीमध्ये ५५ जनाले बिमा सेवा लिएको अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले बताए ।
भीभीआईपी उपचार कक्ष प्रयोगविहीन
विशिष्ट पदाधिकारीको उपचारका लागि ३ दशकअघि भीभीआईपी उपचार कक्ष स्थापना गरिएको थियो । सो कक्ष प्रयोगमा नआउँदा महँगा उपकरण तथा पूर्वाधार नै प्रयोगहीन भएका छन् । १९४६ सालमा स्थापना भएको वीरमा २०४६ सालदेखि नै भीभीआईपी कक्ष स्थापना गरिएको हो । २०५९ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को रूपमा रूपान्तरित अस्पतालमा न्याम्समा एमडी र एमएस, एमडीएस, डीएमएमसीएच साथै पीबीएन, एमएन, एनेस्थेसिया सहायक, एमआईटीमा अध्यापन हुँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले डिजिटल हेल्थको अवधारणा अघि सारिएको भन्दै अस्पतालको संस्थागत विकास गर्न लागिपरेको बताए । उनले बिरामीलाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल हेल्थको अवधारणा अघि सारिएको बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले अस्पतालको जनशक्ति सम्बन्धमा सर्वेक्षण तयारी थालिएको बताए ।
यी खानेकुरा जसको सेवनले तपाईंको ज्यानसमेत जान सक्छ